Enweghị mgbagwoju anya nke oge a, mmepe nke ọrụ ugbo agaghị ekwe omume - akwụkwọ akụkọ "Potato System"
Mmepe nke ọrụ ugbo agaghị ekwe omume ma ọ bụrụ na enweghị mgbagwoju anya nke oge a
в News, Mmiri, Akụkọ mpaghara, Omume / Etu, Injinia / Teknụzụ
Ọ bụ ya mere gọọmentị nke Stavropol Territory ji etinye uche pụrụ iche na mweghachi nke ugbo ala gbara mmiri, ka ọrụ mgbasa ozi nke Ministry of Agriculture mpaghara na-akọ.
Vladimir Sitnikov, onye isi oche mbụ nke gọọmentị Krai kwuru, sị:
- Ekele Gọvanọ Vladimir Vladimirov na nkwado nke etiti etiti gọọmenti etiti, ebe a na-enwetaghachi ala na mpaghara ahụ nwere ihe karịrị okpukpu abụọ karịa afọ 8: site na hectare 34 ruo 76 hectare. Anyị jisiri ike nweta ike dị ike site na 2019 ruo 2021, mgbe nkezi olu ntinye mmiri ruru puku hectare 10. kwa afọ.
Nsonaazụ dị otú ahụ emewo ka mpaghara ahụ bụrụ onye ndu na mmepe nke iweghachi ala. Ma ugbu a, ọ dị mkpa ka anyị nọgide na-agba ọsọ a. Anyị ghọtara na ọrụ ugbo na-agba mmiri bụ isi ihe na-eto eto maka akụ na ụba na ọganihu nke mpaghara ahụ. Ya mere, site n'afọ 2025 anyị na-atụ anya na anyị ga-ebute ala nke eweghachitere na hectare 100.
N'otu oge ahụ, ikike nke mgbagwoju anya nchịkwa mmiri na Stavropol Territory na-eme ka o kwe omume ịnye ebe buru ibu na mmiri. Na ọrụ anyị maka ọdịnihu dị nso bụ ịzụlite ya n'usoro site n'iwu nke ọhụrụ na imeziwanye ụlọ ọrụ mgbake ala dị na mpaghara ahụ.
A tụlere atụmatụ ndị ọzọ maka ọrụ na ntụziaka a na Solnechnodolsk, na nnọkọ nleta nke Kọmitii na-ahụ maka Agrarian Issues of State Duma nke Russian Federation, nke Vladimir Ivanovich Kashin bụ onyeisi oche.
isi: Ozi nke Ugbo nke Stavropol Territory
Tags: reclamugbo ala mmiriObodo Stavropol